Muzinda weZimbabwe muAmerica Unokanzura Musangano Pakati peZvizvarwa zveZimbabwe neGurukota rezveMari VaMthuli Ncube
Gurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube. (Columbus Mavhunga/VOA)
Gurukota rezve mari Muzvinafundo Mthuli Ncube pamwe nemunyori webazi ravo VaGeorge Guvamatanga, avo vari muAmerica kwesvondo rino rese, vanga vachitarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mangwanani eMugovera pamuzinda weZimbabwe uri muWashington D.C., asi musangano uyu unonzi wazokanzurwa.
Kunyange hazvo pasina kupiwa zvikonzero zvaita kuti musangano uyu ukanzurwe, vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti muzinda weZimbabwe watya kuratidzira kunonzi kwanga kwakarongwa nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuti kungavhiringidza musangano uyu.
Zvinonzi zvimwe chizvarwa zveZimbabwe zvakaita saVaInnocent Mawire zvanga zvabva kune mamwe matunhu zvichida kuzonzwa mamiriro akaita zvinhu kumusha munyaya dzekutanga mabhizimusi nekudyara mari kumusha.
Takundikana kubata mumiriri weZimbabwe muAmerica VaTadious Tafirenyika Chifamba kuti tinzwe kuti sei musangano uyu wamiswa.
Sachigaro veZanu PF mudunhu reWashington D.C, Maryland neVirginia, VaFrenk Guni vanoti semaziviro avari kuita musangano uyu wamiswa nekuti vemapato anopikisa, zvikuru vebato reCCC, vanga vakaronga kuzokanganisa musangano uyu vachiratidzira.
Asi vaGuni vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuhazvo kusangana naVamthuli Ncube zvinokwanisa kuita izvi masikati eMugovera, apo vana veZimbabwe vachaungana kuUrbana, muMaryland kumhemberero dzekuzvitonga kuzere kwenyika dzichaitwa nevana veZimbabwe vari muAmerica, sezvo gurukota iri richange ririkowo.
Asi sachigaro webato reCCC mudunhu reWashington D.C., Maryland neVirginia, Muzvare Tafadzwa Matinenga vanoti vatoshamisikawo vachisvika pamuzinda weZimbabwe pakavharwa, uye pasina zvikonzero zvapiwa kuti sei musangano uyu usina kuzoenderera mberi.
Muzvare Matinenga vanoti manyepo kuti nhengo dzebato ravo dzanga dzichida kukanganisa musangano uyu dzichiratidzira vachiti bato ravo ranga risina hurongwa hwakadaro, asi kuti vanga vachingodawo kupinda mumusangano uyu sezvizvarwa zveZimbabwe zvese.
Hurukuro naMuzvare Tafadzwa Matinenga